खुल्लामञ्चमा गरिबले खाँदा सरकारलाई लाज ! - बडिमालिका खबर
खुल्लामञ्चमा गरिबले खाँदा सरकारलाई लाज !
‘मागीखाने र अल्छीहरुको शहर बनाएर बेइज्जत गर्न खोजेको’ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबारदेखि खुल्लामञ्चमा खाना खुवाउने काम बन्द गर्ने निर्देशन दियो । खाना खुवाउनेस्थलमा सुरक्षाकर्मी खटाइयो ।
सरकारको निर्देशनपछि पनि ठूलो संख्यामा खाना खुवाउने अभियान टुँडिखेलमा जारी छ । अहिले पनि यहाँ दैनिक खानका लागि पाँच सयभन्दा बढी उपस्थित हुन्छन् । उनीहरुलाई रोगकोभन्दा ठूलो चिन्ता भोकको छ ।
टुँडिखेलमा बिहान नौ बजे ‘हाम्रो टिम नेपाल’ ले खाना खुवाउँछ । दिउँसो दुई बजे ‘मानवी क्रियटिभ एसोसियसन’, ‘लायन्स क्लब’ र ‘सेफ एसोसियसन’ले खाना खुवाउँछन् । बेलुका चार बजेपछि ‘हर्डेड ग्रुप’ले विपन्न र असहायहरुलाई सामुहिक खाना खुवाउने गरेको छ ।
टुँडिखेलमा खाना खुवाउन रोक्ने महानगरको निर्देशनपछि पनि उनीहरुको कर्ममा अहिलेसम्म ब्रेक लागेको छैन । मानवी क्रियटिभ एसोसियसनका अध्यक्ष बद्रिप्रसाद ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो काम रोकिएको छैन । बुधवार काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बोलाएर खुल्लामञ्चमा हाइजेनिक भएन, पार्टी प्यालेसमा खुवाउनु भन्नुभएको छ ।’
वार्तामा मेयर शाक्यले बरु पार्टी प्यालेसको भाडा आफूहरुले व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । तर, अभियन्ताहरुले काठमाडौं महानगरका मेयरसमक्ष तत्काल पार्टी प्यालेसको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो हुने भएकाले दुई÷चार दिन यसरी नै खुवाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणहरुमा कोही पनि भोकै नपर्ने र भोकै नमर्ने सरकारले प्रवन्ध गरेको बताउँदै आएका थिए । सडकलाई माग्नेहरुबाट मुक्त पारिएको प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बताउँदै आएका थिए ।
तर, अहिले खुल्लामञ्चमा दिनहुँ खाना मागेर खाने मानिसहरुको लाइन देखेपछि पक्कै पनि यसले आफूलाई गिज्याएको सरकारले महसुस गरेको हुनुपर्छ । र, यही कारणले महानगरले बेइज्यती भएको भन्दै खुल्ला ठाउँमा खाना नखुवाउने आदेश गरेको हो ।
सरकारले कोही भोकै पर्दैन भनिरहेकै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीले १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएको र १२ लाख गरिव थपिएको उल्लेख छ ।
महामारीले जनता चरम गरिबीमा पिल्सिएका बेला सरकारले उद्धारको कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा निजी प्रयासमा भइरहेको खाना खुवाउने कामलाई समेत रोक लयाउँदा सरकारप्रति आलोचना बढेको छ ।
भोकभोकै बस्न बाध्य नागरिकका लागि सरकार र काठमाडौं महानगरले अहिलेसम्म कुनै विकल्प नल्याएको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
पहिलो चरणको लकडाउनको क्रममा शहरदेखि, सडक र गाउँसम्म सयौं मानिसहरुले खाना खुवाउने अभियान चलाए । तर, लकडाउन सकिएसँगै सीमित मानिसहरुले मात्र यसलाई निरन्तरता दिए । कतिपय फुड बैंकको अवधारणा लिएर निमुखा र विपन्नलाई खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरे । तर, सरकारले भने राहतको कार्यक्रममा स्वास्थ्योपचारमा जस्तै हात उठाउँदै आइरहेको छ ।
अभियन्ता भन्छन्– खुवाउन्न छाडिन्न
पहिलो लकडाउन ०७६ चैतदेखि नै ठमेलमा निरन्तर विदेशी तथा स्वदेशीलाई भेज बिर्यानी खुवाइरहेका मिन्हाज खानले जस्तोसुकै निर्णय आए पनि आफूले भोकाहरुलाई खुवाउन नछाड्ने बताए ।
पहिले दैनिक २५० जनालाई खुवाउने मिन्हाजले अहिले सयभन्दा बढी भोकाहरुलाई खुवाउँदै आएका छन् । कहिलेकाँही खाना पु¥याउन अलिकति ढिलो हुँदासमेत आफूहरुले निकै दुःख पाएको उनी सुनाउँछन् ।
मिन्हाजले दशैँको दिनमा पनि गरिवको मुख बन्द गरेनन् । ‘खाना नखाउनु भन्नु महानगरको गलत निर्णय हो’, मिन्हाज भन्छन्, ‘मैले कुनै भीडभाड गरेको छैन । जसले जेसुकै निर्णय गरे पनि खुवाउन छोड्दिनँ ।’
छोरा बाबा खोई भन्छ, म कहाँबाट ल्याउँ ?